IMIBONO YOKUGCINA IGARAJI (IIKHABHATHI, IIRACKS KUNYE NEEYILO EZIPHEZULU) - IIGARAJI
Eyona Iigaraji Imibono yokuGcina iGaraji (iikhabhathi, iiRacks kunye neeYilo eziPhezulu)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kwimibono yokugcina igaraji.Igaraji yenye yezona ndawo zingahoywanga kulo naliphi na ikhaya, kodwa enyanisweni ibaluleke njengayo nayiphi na indawo yendlu yakho. Ayisiyondawo yokupaka nje imoto yakho, kodwa ibe yindawo esebenzayo apho ungagcina izinto ezahlukeneyo okanye ukonwabele imisebenzi eyahlukeneyo. Apha ngezantsi uzakubona ezona ndawo zithandwa kakhulu zokugcina igaraji kwiikhabhathi, izixhobo zesifuba, iibhayisikile, ngaphezulu, ishelfu, kunye noyilo lokugcina lwe-DIY.
Ukulungiselela igaraji yomntu kuthathwa ngabaninzi njengomsebenzi oxinzelelekileyo. Ngokuchasene nale nkolelo, ngumsebenzi olula wokuphucula ikhaya ongafunekiyo ukungahoywa. Njengokuyila nayiphi na indawo yekhaya lakho, kufuna ingqalelo kunye nexesha elaneleyo lokucwangcisa. Ukulungiselela igaraji yakho ukuba ibe nakho ngokupheleleyo kunokwenziwa ngeendlela ezimbalwa ezilula ngaphandle kokuchitha imali eninzi.
Isitshixo kwigaraji ekhangeleka ngcono kukucwangcisa izinto zakho usebenzisa izimvo ezahlukeneyo zokugcina igaraji. Ukusuka kwizinto zonyaka ezinje ngephenyane, izinto zokukhempisha, izixhobo zangaphandle, izixhobo zemidlalo, iiholide zokuhombisa izixhobo ezisetyenziswa rhoqo kunye nezixhobo, igaraji ibe yindawo apho abantu bagcina isixa esikhulu sezinto zabo. Iinkqubo zokugcina igaraji ziyindlela elungileyo yokusebenzisa indawo engasetyenziswanga kwaye uyiguqule ibe yindawo ehlelwe kakuhle. Kukho iindlela ezininzi ezikhoyo kwiimarike ezixhomekeke kwiimfuno zomntu. Nokuba ingaba zishelufa ezivulekileyo, iinkqubo zodonga oluqinileyo okanye amagwegwe alula, ezi zisombululo zinokuhamba indlela ende.
IiKhabhinethi zeGaraji zokuGcina
Ukugcinwa kwebhayisikile yeGaraji
Isixhobo seGaraji sokuGcina
Ukugcinwa kweGaraji engaphezulu
Indawo yokugcina iigaraji
Iishelufa Zokugcina Igaraji
Ukugcinwa kweGaraji kweGaraji
Ukugcinwa kweGaraji le-DIY
Nazi ezinye ze izibonelelo Ukuba neenkqubo zokugcina igaraji:
Yandisa ikhaya lakho. Kuqhelekile ukufumana izinto zihlala zisasazekile kwiigaraji, kwaye kuhlala kungenxa yokuba akukho kugcinwa kufanelekileyo kwezi zinto. Ukulungiswa kwakhona kukhulula indawo kwaye kunceda wandise indawo yakho yegaraji.
Indawo yeenjongo ezininzi. Ukugcinwa kwegaraji kunokukunceda uguqule igaraji yakho ibe yindawo esebenzayo okanye yonke kwindawo enye. Ngezisombululo ezilula zokugcina, ngoku ungasebenzisa igaraji yakho njengegumbi lodaka apho ungashiya khona izixhobo zangaphandle kunye nezihlangu ukukhusela ikhaya lakho ekungcoleni, indawo yokusebenza apho ungonwabela iiprojekthi ze-DIY kunye nemisebenzi yezandla, indawo yokuzivocavoca yokuchitha ukuzilolonga rhoqo, indoda Umqolomba wokuchitha imva kwemini yokuphumla okanye igumbi lomdlalo elinobuhlobo losapho apho ungadibana nabantwana.
Yonga imali. Ukufumana indawo yokugcina efanelekileyo kuya kukunceda ulingane nayo yonke into esekhaya, ususe isidingo sokurenta indawo yokugcina eyahlukileyo.
Isusa ukungqubana. Njengoko siqokelela izinto kule minyaka idlulileyo, kunzima ukuthintela ukungqubana ekufumaneni izindlu zethu. Isisombululo esifanelekileyo sokugcina siya kukunceda uhlele izinto ongasazifuniyo kwaye uzifihle kude nomgca wokubona.
Ukuphuculwa kokugcinwa. Ukugcinwa kwegaraji kubonelela ngendlu ehlelwe kakuhle kuba oku kukuvumela ukuba ugcine, ubeke iqela kwaye uhlele izinto zakho ngokusekwe kuhlobo lwazo. Umzekelo, izixhobo zegadi zixhonywe kumagwegwe, izixhobo zonke zibekwe kwikona enye, njl.
Yongeza lula. Iinkqubo ezifanelekileyo zokugcina igaraji zikuvumela ukuba ufumane kwaye ulawule izinto ngokulula. Kuba izinto zigcinwa kakuhle kwaye zilungelelaniswe, akukho sidingo sokudlula kwindawo yokugcina okanye kwikhabhathi nganye kwaye ujonge into oyifunayo.
Umsebenzi osebenzayo kunye nokuhamba kwezithuthi. Igaraji eyenziwe kakuhle ikuvumela ukuba uhambe ngokukhululekileyo. Kuba akukho zinto zibekwe zijikeleze umgangatho okanye zisasazekile kwiindawo, ivumela ukugcwala ngakumbi kokusebenza kunye nokuhamba komsebenzi kwigaraji.
Ulawulo lwezixhobo luyasebenza . Iibhodi zezikhonkwane okanye ukuxhoma izixhobo zegadi kwenza izixhobo zifumaneke ngaphakathi kokufikelela kwesandla ngelixa usebenza kwiiprojekthi. Oku kukwenza ugcine ixesha kunye nomzamo ngokunjalo.
Konyusa ukujongwa kwegaraji yakho. Ukugcinwa kwegaraji akuqwalaselwa nje njengongezo olusebenzayo kwikhaya lakho kodwa njengombonakalo wokuhombisa ngokunjalo. Igaraji elungelelaniswe kakuhle iyathandeka emehlweni. Jonga eli phepha ngeendlela ezininzi zokuphucula ikhaya lakho Imibala yomnyango wegaraji .
Yongeza ixabiso ekhayeni lakho. Ukuphuculwa okumbalwa kuya kwenza ixabiso lokuthengiswa kwakhona kwekhaya lakho liphezulu kwaye kwandise amathemba okuthengisa ekhaya. Umsebenzi osetyenziswayo kunye nendawo yokugcina inqweneleka kubathengi.
Ixabisa malini ukongeza ukugcinwa kwigaraji?
Ixabiso eliqhelekileyo lokongeza ugcino lwe- Ushintsho lwegaraji ihlala isukela kwi- $ 740 ukuya kwi-2400 yeedola ngeprojekthi nganye, ngexabiso eliphakathi le- $ 1400. Ngaba iiprojekthi ngokwakho zinokufezekiswa ngohlahlo-lwabiwo mali lwe- $ 1000 okanye ngaphantsi. Nangona kunjalo ezi ndleko ziqikelelweyo zisengaya phezulu okanye ezantsi kuxhomekeke kwizixhobo ezisetyenzisiweyo, uhlobo lwenkqubo yokugcina kunye nabasebenzi ekuvunyelwene ngabo.
Ukuba ucwangcisa ukuthatha ulungelelwaniso lwegaraji njengeNza ngokwakho iprojekthi, iiyunithi zokugcina igalaji ezineshelfu eludongeni zihlala zithengiswa kwiivenkile zokuphucula ikhaya kwi- $ 50 ngesiqwenga ngasinye. Iiyunithi ezinkulu zokubeka ishelfu zihlala ziyi- $ 200 ngesiqwenga ngasinye, ngelixa amagwegwe athengiswa ngexabiso elifikelelekayo nge-10 ukuya kwi-20 yeedola.
Iinkqubo zokugcina ezifakwe kubuchwephesha zibiza kakhulu. Indawo yokugcina igalaji yesiqhelo ihlala i-1200 ukuya kwi-1500 yeedola ngeqashiso. Kwiinkqubo ezintsonkothileyo ezinokudityaniswa kweeshelfu, iikhabhathi, indawo yokugcina eludongeni tyaba kunye nendawo yokusebenza, iindleko zeprojekthi zinokuya kwi- $ 3000 ukuya kwi-5000 yeedola.
Xa kuziwa kubasebenzi kunye nofakelo, ungayifaka ngokwakho okanye uqeshe ingcali ukuba ikwenzele umsebenzi kuxhomekeke kubunzima benkqubo yakho yokugcina. Iinkqubo zokugcina igaraji ezifanelekileyo ziqinisekisa kungekuphela nje imveliso esemgangathweni kodwa zikunceda ukhethe oyilo olufanelekileyo lwendawo yakho. Iikontraki zinokubonelela ngegalelo eliluncedo kuyilo kunye nenkqubo yokucwangcisa ngelixa zikunceda ufumane olona khaya lwakho. Izixhobo zolu hlobo lweprojekthi ziyafumaneka kwiivenkile zokuphucula ikhaya okanye abathengisi abakhethekileyo kunye nabavelisi. Ezinye iindlela ezikhoyo ziyafumaneka kwi-Intanethi.
Izinto ezisisiseko kwizisombululo zokugcina igaraji
Zintathu izinto eziphambili kugcino lwegaraji ezizezi: iikhabhathi, ishelfu kunye nokugcina ngaphezulu. Nganye inezibonelelo ezahlukeneyo kwaye iya kusebenza kuxhomekeke kwiimfuno zakho. Olona khetho lufanelekileyo kwinkqubo yokugcina igaraji elungileyo kukudibanisa ezintathu. Oku kuyakuvumela ukuba ugcine zonke izinto zakho kuxhomekeke kuhlobo lwazo, ubungakanani okanye amaxesha osetyenziso.
Uthatha njani isigqibo ngohlobo lokugcina olufunekayo kwigaraji yakho? Ngaphandle kokuvavanya iimeko ezikhoyo zesithuba, ungasebenzisa le khweshine njengesikhokelo sokukhetha izimvo ezifanelekileyo zokugcina igaraji kwindawo yakho:
Ngaba uzimisele ukusebenzisa igaraji yakho?
Ngaba ikhona eminye imisebenzi ofuna ukuyenza kwigaraji yakho? Umzekelo: ubugcisa, umsebenzi, ukuzilolonga, ukuzihlalela, ukudlala imidlalo, njl.
Zingakanani izinto ekufuneka uzigcinile?
Zeziphi iintlobo zezinto ofuna ukuzigcina?
Phakathi kwezi zinto, yeyiphi eza kusetyenziswa rhoqo kwaye yeyiphi yamaxesha onyaka?
Ngaba ufuna ukugcinwa kwezinto ezinkulu ezifana nephenyane okanye iibhayisekile?
Ngaba ufuna ukugcina ngaphakathi okanye ngaphakathi?
Ngaba inkqubo yokugcina ifanele ibonakale njengefanitshala?
Emva kokumisela injongo, ngoku ungaqhubeka ngokusombulula inkangeleko kunye nokuziva kuyilo lwegaraji yakho. Inyathelo elilandelayo kukuseka uhlahlo-lwabiwo mali. Elinye icebo eliphambili onokuthi ulithathele ingqalelo ekucwangciseni nasekucwangciseni indawo yokugcina igaraji kukuba utyalomali oluncinci lunokukunceda uhambe indlela ende. Ukutyala imali kwiimveliso ezisemgangathweni kunokufuna uhlahlo-lwabiwo mali olukhulu kodwa ngokuqinisekileyo kuya kuhlawula ekuhambeni kwexesha kuba kunokwenzeka ukuba kudlule iminyaka.
Zeziphi izinto eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukugcinwa kwegaraji?
Xa kuziwa kwimathiriyeli, ezona zinto zidumileyo zenkqubo yokugcina igaraji sisinyithi. Nangona zibiza kakhulu, iinkqubo zokugcina iigaraji zentsimbi zingqinisisiwe ukuba zinotyalo-mali olusebenzayo kuba zinokuxhasa amaxabiso ahlukeneyo wobunzima kwaye zinokunyamezela ukonakala kwemihla ngemihla. Kuba ngumsebenzi onzima, inokuphatha izinto ezinkulu ezinje ngeebhayisikile okanye amaphenyane. Impazamo enye yokusebenzisa isinyithi kukuba inomdla kurusi, ke qiniseka ukuba iyonyuswa ngonyango olunobungqina bokuba umhlwa ngaphambi kokusetyenziswa.
Iplastiki yinto eqhelekileyo esetyenziswa kwiikhabhathi zegaraji nakwishelufa. Ixabiso elingabiziyo kwaye libonakaliswe njengebala kwaye linokumelana neekhemikhali, alinamanzi elenza ukuba limelane nokulwa, umhlwa kunye nokubumba okubangelwa kukufuma. Nangona ifikeleleka, ayiboneleli ngobuhle obufanayo obenziwe ngokhuni kuba ineendlela ezimbalwa zoyilo. Ngaphandle kwalonto kuyacetyiswa kuphela kugcino olulula lomsebenzi.
Enye into eqhelekileyo esetyenziselwa iinkqubo zokugcina igaraji ngumthi. Umthi ukhethwa kakhulu ngabanini bamakhaya abaninzi ngenxa yokuguquguquka kwawo. Inika ukhetho ngakumbi xa kuziwa kuyilo kwaye ayibizi kakhulu. Nangona kunjalo, umthi uthambekele ekuthinteleni ukosuleleka, ukubola, ukujija kunye nokuqhekeka yiyo loo nto ifuna unyango kunye nokugcinwa kwamaxesha ngamaxesha. Iikhabhathi zegaraji ezenziwe ngomthi nazo ziza kwezinye iifom ezifana neplywood, i-hardwood, i-MDF (ibhodi yefayibha exineneyo) okanye ibhodi yamasuntswana. Unokufaka isicelo sokugqitywa kwebala, i-laminated okanye ipeyinti ngokuxhomekeke kwinto efanelekileyo kukhetho lwakho.
Apha unokufumana imibono eyahlukeneyo yokugcina igaraji kunye nokukhuthaza uyilo. Siza kuthetha ngohlobo ngalunye ngokucokisekileyo njengoko sigubungela iinkcazo zabo, izinto ezintle nezingalunganga kunye neendleko zabo. Funda kwaye ufumane ukuba loluphi uhlobo lwegaraji olugqibeleleyo olona khaya lakho.
Ikhabhathi yokugcina igaraji yeyona ndlela ithandwayo neyona ilunge kakhulu yokuququzelela ukungqubana kwegaraji. Nangona ithatha indawo engaphezulu, eyona nto iluncedo kuyo kukufihla ukungqubana. Inika indawo yazo zombini izixhobo ezikhulu nezinkulu, izixhobo kunye nezixhobo ngelixa kugcinwa konke ukungcola okufihliweyo ngasemva kocango olwenziwe kakuhle nolwenziweyo. Uyilo ngobulumko, iikhabhathi zokugcina igaraji zinokuguquguquka kuba ziza ngeendlela ezahlukeneyo, ubukhulu, imibala kunye nokugqitywa.
yenyuka ilokhwe yomtshakazi yegolide ende
Iikhabhathi nazo zinokuzenzekelayo kwaye zinokuguqulwa ngokweemfuno zomntu. Olunye uncedo lweekhabhathi zokugcina igaraji kukuba akukho bungozi bokuwa kwezinto phezu kwemoto yakho okanye izinto ezityhalelwa phantsi kwayo. Inika ukhuseleko kwimoto yakho kuba zonke izinto zigcinwe ngokukhuselekileyo kude.
Iikhabhathi zokugcina igaraji ziza nezinto ezahlukeneyo ezifana neenkuni zendalo, iplastiki, isinyithi, i-MDF okanye iibhodi zamasuntswana. Ikwaqwalaselwa ibiza kakhulu kunezinye iinkqubo zokugcina igaraji ngamaxabiso aphakathi ukusuka kubuncinci be- $ 100 kwikhabhinethi enye evulekileyo.
Iimodyuli zeekhareji zeemodyuli nazo ziyathandwa kwimarike njengoko zilukhetho oluphezulu malunga nokuguquguquka. Inkqubo yemodyuli inceda ukwandisa izithuba njengoko iikhabhathi zilungelelaniswe ngokugqibeleleyo kwaye zilungele isiko kwindawo ekhoyo kwigaraji yakho. Ikwayindlela entle yokonga kwimali kuba inika ithuba lokuba uthenge kuphela into oyifunayo. Iza ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo, izixhobo zekhompyutha kwaye zihlala zithengwa kuseto ngalunye.
Umgangatho weenkqubo zekhabinethi yophahla yenza uninzi lweendawo zegaraji ngokunika elona xabiso liphezulu lokugcina. Inkqubo yekhabhinethi emhlophe eboniswe emfanekisweni ayisebenzi nje kuphela kodwa inika indawo indawo umoya ococekileyo wokujonga kunye nokubukeka okubanzi.
Gqibezela inkqubo yokugcina ikhabhathi yegaraji-iWayfair
Ukugubungela iinyawo ezingama-30 zegaraji kule nkqubo yekhabhinethi inika ubuninzi bokugcina izixhobo kunye nezinye izinto zonyaka ongathanda ukugcinwa ngokukhuselekileyo ngaphandle kwamehlo.
Indibaniselwano yeenkqubo ezahlukeneyo zekhabinethi ezinje ngeekhabhathi ezingaphezulu nangaphantsi kweekhabhathi zekhawuntari zinika indawo eyaneleyo yokugcina kwaye zibonelela ngekhawuntara yokusebenza enokusetyenziselwa imisebenzi eyahlukeneyo.
Ikhabhathi ende yokugcina igaraji yeplastiki
Iiplastikhi zokugcina iiplastikhi ziyafumaneka ngokulula kwiivenkile zokuphucula ikhaya okanye kwi-Intanethi. Ngaphandle kokufikeleleka, ubungakanani bayo obumbeneyo buvumela ukuba ibekho ngokulula ezimbombeni ngelixa ibonelela ngokugcinwa kwezinto ezahlukeneyo.
Cwangcisa ukuGcina iGaraji yensimbi
Nangona kubiza, oku kugcinwa kwegaraji yensimbi enzima kugcina izinto zakho zilungelelaniswe kakuhle njengoko kuza needrawer ezahlukeneyo kunye namagumbi. Kuba iza kuseto, awunakukhathazeka malunga nokucwangcisa iziqwenga ngokudibeneyo.
Iibhayisikile azingobukhulu nje kuphela kodwa zikwabhaso elincinci lokuzigcina. Ngokufanelekileyo, iibhayisekile zinokubekwa ezindongeni okanye iisilingi ukuzigcina zingaphandle kwendlela. Eyona ndlela ilula yokwenza oku kukusetyenziswa kweenzipho okanye amagwegwe angabizi kakhulu. Olunye ukhetho lokugcina iibhayisikile lubandakanya ukusebenzisa iipleyi okanye iihops. Iibhasikithi zokuphakamisa ibhayisekile zihlala zixhobile ngento ekhuselekileyo kwaye inokuxhasa ukuya kuthi ga kwiipawundi ezili-100 ukuya kuthi ga kwi-12 yeenyawo ukuphakama.
Iirakhi zebhayisekile okanye izitendi zebhayisekile eludongeni, kwelinye icala, zibekwe ezindongeni kwaye zinokuxhasa ukuya kuthi ga kwiibhayisikile ezi-2. Iinkqubo zokugcina ibhayisekile zihlala zixabisa i- $ 20 ukuya kwi-200 yeedola. Izimvo zokugcina igaraji ngeebhayisikile zihlala zihamba nkqo okanye ngaphezulu ngexesha lonyaka ongekhoyo ukugcina iibhayisikile zikhutshiwe amaxesha apho zingafuneki khona.
Iibhayisikile zinokuxhonywa eluphahleni ukuze kukhululwe indawo yomgangatho kwaye zithintele ukuba zingasasazi zijikeleze igaraji yakho.
Gravity Yima Rack Bike
Oku kulula ukudibanisa isitulo sebhayisekile akudingeki ukuba sibekwe ezindongeni kwaye sinokugcina iibhayisekile ezi-2 ngaphandle kokuthatha indawo eninzi.
Igaraji ithathwa njengeziko lezixhobo ekhaya. Ukuba yindawo apho kupakwe khona imoto, kufanelekile ukugcina zonke izixhobo kunye nezixhobo zokugcina nokulungisa apha. Ayisiyondawo yokugcina kuphela kodwa ikwasebenza njengendawo yokusebenzela ukuze enye yezona mfuno zayo ziphambili kukusebenza kwendawo.
Kukho iindlela ezininzi zokugcina isixhobo nokuba sinokushenxiswa okanye sakhiwe ngaphakathi. Ibhokisi yesixhobo esiphathwayo ivumela izixhobo ukuba zihanjiswe ngokulula kwigaraji ngelixa usenza umsebenzi wokulungisa kwimoto yakho. Kubanini makhaya abafuna indlela ecwangciswe ngakumbi yokugcina izixhobo, ukhetho olunye lokujonga ibhodi yesikhonkwane. Ibhodi yesikhonkwane yindlela engabizi kwaye iyasebenza yokukhulula indawo esemgangathweni kwigaraji kuba zonke izixhobo zixhonywe kumagwegwe aseludongeni.
Kuba yonke into ibonisiwe, akukho sidingo sokudubula ngemipu kwaye ukhangele into oyifunayo. Ngamanye amaxesha, isixhobo esikhonkxwayo sidityaniswa kunye nebhanti eyakhelweyo. Indlela efikelelekayo ngakumbi nelula yokuxhoma izixhobo kukusebenzisa imitya yemagnethi.
Iinkqubo zodonga olume nkqo zinemingxunya evumela ukufakwa kweebhasikithi zocingo kunye neehuku. Olu luyilo lukwabonisa indibaniselwano yeentlobo ezahlukeneyo zendlela yokugcina igaraji ezenza umbutho ulungiselelwe ngokupheleleyo.
Iibhodi zezikhonkwane zigcina izixhobo ziboniswa ngokupheleleyo zigcina yonke into ifikeleleka kwaye kulula ukuyifumana.
Ukugcinwa kwegaraji engaphezulu sisisombululo esifanelekileyo sokwandisa kunye nokwandisa amagumbi. Isebenzisa iibhodi ezikwi-rack system efakwe eluphahleni. Oku kuqiniswe ngokukhuselekileyo ngokudibanisa i-rack kwizibophelelo zesilingi ngokusebenzisa iibholiti. Izibiyeli zophahla zisetyenziswa njengonxibelelwano ezenza ukuba zihlengahlengiswe. Ihlala yenziwe ngentsimbi yomsebenzi onzima kwisinyithi esityhidiweyo.
yintoni umahluko phakathi kwe-ms kunye ne-miss
Ngenxa yokuba ingekho phantsi, ikhulula indawo yokwenza imoto yakho kwaye ivumela indawo engakumbi ukuba ihambe ngokukhululekileyo. Izibonelelo zayo zibandakanya ukufikeleleka ngokulula kokucoca kunye nokutshayela. Izinto zikwathambeka kancinci ukufuma okubanjisiweyo kuba azidibani nomgangatho. Ikwafumana ukungqubana kumgca wombono.
Umda wayo, nangona kunjalo, kukuba akukho lula ukufikelela kuwo kwaye ngamanye amaxesha ufuna ukuba usebenzise ileli ukufikelela kwenye into. Yinkqubo efanelekileyo yokugcina izinto ezingasetyenziswa rhoqo ngaphandle kwendlela. Oku kuyenza ukuba ifaneleke kakhulu ukugcina izinto eziphakathi ukuya kwezinkulu ezinamaxesha onyaka kwaye kunqabile ukuba zisetyenziswe ezinje ngeekampu zegiya, amaphenyane okanye izixhobo zokuskiya.
Olu hlobo lwenkqubo yokugcina luhlala lusetyenziswa kunye nemigqomo yokugcina iplastiki. Qiniseka nje ukuba ukuba ucwangcisa ukwenza njalo, sebenzisa imigqomo ecacileyo yokugcina izinto ukuze ukwazi ukufumana izinto ngokulula okanye unokuncamathisela iilebheli emgqomeni ngamnye.
Inkqubo yokugcinwa kwegaraji engaphezulu inokubiza naphina ukusuka kwi-100 ukuya kwi-400 yeedola ngokuxhomekeka kuhlobo kunye nobukhulu bayo. Ukuqina kwayo kuyivumela ukuba ixhase malunga neepawundi ezingama-300 ukuya kuma-600. Ingqina ukuba lutyalo-mali ngobulumko kuba inokuhlala ixesha elide kwaye ihlala iza newaranti yobomi.
Ii-racks zentsimbi ezingaphezulu zinokuxhasa ubunzima bezinto ezinzima ngoko ke kufanelekile kakhulu ekugcineni imigqomo yokugcina kunye nezinto zonyaka ezinje ngeebhegi zemithwalo. Ukugcinwa okuboniswe apha ngasentla kunokufakwa ngaphezulu kwe umnyango wegaraji , iyenza ngakumbi nangakumbi indawo efanelekileyo.
Iinkqubo zokugcina isilingi zegaraji ziyafana neenkqubo zokugcina ngaphezulu. Zombini ezi ntlobo zisebenzisa izithuba eluphahleni kwaye zicoca indawo yomgangatho. Kukwacetyiswa kakhulu ngokugcina izinto ezingasetyenziswanga rhoqo. Xa kuziwa kwizibonelelo, ngokusisiseko baneempawu ezifanayo ezifanelekileyo. Icala elisezantsi leenkqubo zokugcina isilingi zixhomekeke kuhlobo lwezinto ezisetyenzisiweyo.
Olona hlobo luxhaphakileyo lwenkqubo yokugcina isilingi yigaraji yirack yentloko yesinyithi esele yenziwe kwaye ilungele ukufakwa. Olu hlobo lwaxoxwa ngaphambili. Olunye uhlobo kukugcina isilingi ngomthi okwenziwe ngeplanga leplanti le-cantilevered eliqingqiweyo elibotshelelwe eluphahleni kwaye lixhaswe zizitudiyo. Inokwakhiwa kwakhona ngenkqubo yokulandela umkhondo ukuba ufuna ukuba yonke into ihambeke kwaye ihlengahlengiswe.
Iinkqubo zokugcina isilingi zomthi ziqhelekile Zenzele iiprojekthi ngaphandle kokukhohlisa ukufaka. Xa kuthelekiswa nolunye uhlobo lweenkqubo zokugcina igaraji, kufuna umgudu ophakathi ukufakela ngenxa yoyilo olulula. Ngokubekwa ngononophelo kunye nokucwangciswa okufanelekileyo, kunokukunceda wonge imali.
Ezinye iinkqubo zokugcina isilingi zibandakanya ishelfu okanye amagwegwe kuyilo lwayo. Isilingi ezixhonyiweyo zentsimbi zihlala zine-mesh yoyilo evumela ukuba kufakwe amagwegwe okwenza ukuba kugcinwe iibhayisikile.
Iinkqubo zokugcina isilayidi ezixhonywe eluphahleni zikhulula indawo yomgangatho zikunika igumbi elininzi leminye imisebenzi kwigaraji. Ukufumana isisombululo esisebenzayo sokugcina, hlanganisa iimodyuli zekhabinethi kunye neesilingi eziphezulu. Ezi zisombululo zisebenza kakuhle kwizithuba ezikhulu ezinendawo eyaneleyo ukunqanda ukuphazamiseka Ukuvula ucango lwegaraji .
uyifumana njani indawo yemifanekiso
Inkqubo egcinwe kakuhle yegaraji inika ngakumbi indawo yokupaka. Yenziwe ngentsimbi enzima, yomelele ngokwaneleyo ukuxhasa ubunzima bemigqomo emikhulu yokugcina impahla.
I-Rack Yokugcina Igaraji
Izikhonkwane zinokongezwa kwiirack zokugcina ezihamba nazo kwaye zinokusetyenziselwa ukuxhoma iibhayisikile, iiambrela okanye izixhobo ezide eziphathwayo.
Indawo yokugcina iigaraji sele ilungile yenziwe iiyunithi ezishelifini ezinokufakwa kufutshane nodonga okanye embindini wayo nayiphi na indawo yegaraji. Ihlala yenziwe ngeplastiki enzima okanye isinyithi esiqinileyo kwaye imile okanye inamavili avumela ukuhamba. Ukugcinwa kwee-racks kukwahlengahlengiswa kwaye kulula ukumisela. Ukufuna umgudu omncinci wokudibana, ikwafikeleleka kakhulu ngesiqhelo ukusuka kwi-30 ukuya kwi-100 yeedola kwiseti ye-4 ukuya kwe-5. Ukugcinwa kwegaraji kugcinwa kwindawo yokugcina ikhaya kunye nakwiivenkile zokuphucula ikhaya.
Ezinye izibonelelo zokusebenzisa iiraki zokugcina iigaraji zibandakanya ukuguquguquka ekusebenziseni njengoko kusetyenziselwa izinto ezininzi kwaye kunokusetyenziselwa ukugcina izinto ezahlukeneyo. Izinto ezigcinwe apha zibonakala kakhulu kwaye ziyafikeleleka ezenza ukuba kufaneleke ukubamba izinto ezincinci ukuya eziphakathi ezisetyenziswa rhoqo ezinje ngeempahla zonyaka, iimpahla zezilwanyana, izixhobo zokucoca kunye neebhokisi. Ulondolozo lulumkile, kulula ukulucoceka olufuna ukosula ngamanye amaxesha. Olunye uphawu olululo lwee-racks zokugcina kukuba umthwalo awuphetheyo uhanjiswa ngokulinganayo yiyo loo nto ingathandeki ekophulweni okanye ekunciphiseni.
Garage Metal leposi kweeshelfu
Ishelfu yokubeka ishelfu yenziwe ngentsimbi enzima kwaye zizisombululo zokugcina ezifikelelekayo zokubonisa izinto ezisetyenziswa rhoqo.
Ukugcinwa koRhwebo lweBin Rack
Ukugcinwa kweeracks ezinamavili okanye iisamente zilungele ukugcina izinto ezincinci ezinje ngezinto zokuphucula ikhaya okanye ulondolozo lweemoto njengoko zinokushukunyiswa zijikeleze indawo xa uzifuna.
Plastic Garage leposi kweeshelfu
I-Plastic rack shelving ilula kodwa ihlala ixesha elide kwaye inokusetyenziselwa ukugcina izixhobo ngaphandle kokukhathazeka malunga nokonakaliswa kukufuma.
Iishelufa zokugcina iigaraji zezona zisemgangathweni, ziluncedo kakhulu kwaye kulula ukuzifaka kuzo zonke iintlobo zokugcina igaraji ezakhelweyo. Kuba izinto zigcinwa zibonisiwe kwinqanaba lemehlo, kulula ukufumana into oyifunayo. Amashalofu avulekileyo avumela ukufikelela ngokulula kuba kugcina yonke into ifikeleleka. Kananjalo, kufanelekile kakhulu ekugcineni izinto ezincinci ukuya kwelikhulu ezisetyenziswa rhoqo kwaye ziluncedo ngalo mzuzu. Enye yeengxaki zayo kukuba kunokubakho izinto eziwayo.
Iishelufa zokugcina iigaraji zinokwakhiwa njengesiqwenga esinye okanye kumanqanaba amaninzi. Kanye njengeekhabhathi zegaraji, ezona zinto zixhaphakileyo zokugcina iigalafu zeplastiki, iinkuni kunye nentsimbi. Iishelufu zeplastikhi sisisombululo esikhawulezayo, esilula, esineendleko kunye nesondlo. Kodwa umgangatho wayo ophantsi awunako ukuxhasa ubunzima. Ukuqinisekisa ukuba yomelele ngokwaneleyo ukuxhasa ubunzima obunzima, ungathenga ishelfu ephezulu yeplastiki ebiza kakhulu.
Iishelufa zomthi, kwelinye icala, kulula ukusebenza kunye kwaye ziguquguquka kakhulu njengoko zinokunqunyulwa ukuze zilungele iimfuno ezithile. Ihlala ixesha elide kwaye inomtsalane wendalo ngobuhle obungenakuthelekiswa nayo nayiphi na enye into. Nangona kunjalo, iinkuni kufuneka zifakwe kunyango kuba zinokugoba, ziqhekeze okanye zibole ngenxa yokuba iigaraji ziboniswa ukufuma ngenxa yokugquma okungalunganga. Uhlobo lokugqibela zishelufa zesinyithi ezithandwa kakhulu ngenxa yomeleleko kwazo. Iishelufu zensimbi ezisindayo zinokuxhasa ubunzima obuninzi ngexesha elide.
Ngaphandle kokufikeleleka, inentengiso ebanzi. Kwakhona kulula ukuyinyusa kwaye inokuhambelana nemisebenzi eyahlukeneyo. Iimpawu ezingalunganga zeeshelufu zentsimbi zibandakanya ukubanakho komhlwa kunye nezithintelo kuyilo njengoko zingenakutshintshwa kwiimfuno ezithile.
Kit yeGaraji yokuLungisa
Le khithi yokubeka ishedyuli yentsimbi iza kuseto olupheleleyo kunye nebhodi yesikhonkwane sokuxhoma izixhobo kunye neeshelfu zokugcina ibhokisi kunye nezinye izixhobo zokuphucula ikhaya kwigaraji yakho.
Ukugcinwa kodonga lwegaraji kuyasebenza njengoko kukuvumela ukuba upakishe izinto ezininzi ngelixa ugcina indawo yomgangatho icacile. Kuyanceda ukuba ufumane yonke into ngephanyazo kuba zonke izinto zibonisiwe emehlweni akho. Sisisombululo esifanelekileyo sokugcina izinto ezisetyenziswa rhoqo ezincinci ukuya kweziphakathi ezinje ngezixhobo zokulima, izixhobo kunye nezixhobo zemidlalo. Olu hlobo lwenkqubo yokugcina lufanelekile ekusebenziseni iileyile ezimxinwa phakathi kodonga lwecala legaraji kunye nemoto.
Iinkqubo zokugcina udonga zinokuxabisa ubuncinci beedola ezili-100 kuxhomekeke kwizixhobo ezisetyenzisiweyo. Ingathengwa njengeenkqubo zepaneli esele yenziwe okanye inokwakhiwa ukusuka ekuqaleni kusetyenziswa izinto ezahlukeneyo ezinjengomthi, isinyithi okanye iinkuni ezenziwe ngobunjineli.
Kukho iintlobo ezininzi zokugcina igaraji. Nazi ezinye zeentlobo zazo eziqhelekileyo:
Inkqubo yeDonga leSlate-Inkqubo yodonga lweSlate iqulathe iphaneli yodonga equlathe imijelo esasazwe ngokulinganayo. Iikhonkco okanye iishelfu zifakwa kwimingxunya. Inketho yokugcina ngeendlela ezahlukeneyo, ivumela ukuboniswa kwezinto ezisetyenziswa rhoqo kunye nezixhobo. Ihlala yenziwe ngeplastiki ye-melamine okanye ngomthi kunye nexabiso layo naphi na phakathi kwe- $ 100 ukuya kwi-300. Izixhobo ezinje ngeehaksi, izinto zokubamba izixhobo, iishelfu, iihanger kunye neebhasikiti zentsimbi ziyafumaneka ukuze zithengwe kwimarike.
Isikhonkwane seBhodi -Ngokucacisa, ibhodi yesikhonkwane sisiqwenga sebhodi enepatheni eqhelekileyo yemingxunya emincinci yokubamba izikhonkwane ezinokusetyenziselwa ukubonisa izinto. Iyafumaneka kuluhlu olubanzi lwezinto ezinjengomthi, iplastiki kunye nesinyithi kwaye inemibala emininzi onokukhetha kuyo. Kuthengiswa kubungakanani obuqhelekileyo beenyawo ezi-4 nge-8 iinyawo, iibhodi zezikhonkwane ziyafikeleleka kwaye zinokuthengwa kwiivenkile zokuphucula amakhaya endawo nge- $ 30 ukuya kwi-200 yeedola inye. Olona hlobo lusetyenziswayo kwiibhodi zezikhonkwane kuphuculo lwasekhaya kukubonisa izixhobo kwigaraji yakho. Isusa isidingo sokuya ngaphezulu kweedrowa njengoko ujonga izinto ozifunayo kwaye igcina yonke into ikufikelela. Lulongezo olufanelekileyo kwiindawo zokusebenzela njengoko iqinisekisa indawo engenamakhonkco kunye nokuhamba ngokukuko komsebenzi.
Adjustable Wall Shelving - Olu hlobo lwenkqubo yokugcina udonga lwegaraji kulula ukuyifaka kwaye inokwenziwa ngaphandle koncedo lwengcali. Isitshixo sokwakha le nkqubo kukuncamathelisa imitya yeplywood kwistonga sodonga lwesinyithi kusetyenziswa izikrufu. Naluphi na uhlobo lwezixhobo zokugcina izixhobo ezinokufakwa kwinkqubo yedonga kuba iyahlengahlengiswa kwaye amanqanaba anokutshintshwa ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho. Kuba iinkuni ziyakusetyenziselwa iiseyile ezinokuhlengahlengiswa eludongeni, qiniseka ukuba izinto ziphathwa kuqala ukuze ikwazi ukumelana nokuvezwa kokufuma kwaye ixhathise ukugoba, ukubola, ukubola kunye nokudumba. Indawo yokuhlala eludongeni ehlengahlengiswayo ihlala ixabisa i-100 yeedola ukuya kwi-500 yeedola ngokuxhomekeke kuyilo, ubungakanani kunye nenani lamanqanaba. Inokugqitywa nge-varnish, ibala, ipeyinti, uxinzelelo oluphezulu laminate okanye ishiye umbala wayo wendalo.
Iibhodi zezikhonkwane zentsimbi zinokubonisa isixa esikhulu sezixhobo ngaphandle kokuthatha indawo enkulu. Lulongezo olufanelekileyo kwindawo yokusebenza njengoko isusa isidingo sokudlula kwiidrowa xa ufuna izixhobo.
Imigqomo yokugcina iplastikhi iyafikeleleka kwaye ilungele ukugcina naluphi na uhlobo lwezinto. Beka ngaphezulu kweentsimbi ezinzima zentsimbi ukulungiselela ukufikelela.
Yenza ngokwakho iinkqubo zokugcina igaraji zikunika igumbi elininzi lokuyila kwaye zikuvumela ukuba ulungiselele uyilo ngokweemfuno zakho, ukhetho kunye nencasa. Kubanini bamakhaya abanexesha elithe kratya kwaye bafuna ukonga imali ngokweendleko zabasebenzi, ke oku kunokuba yeyona ndlela ilungileyo kuwe.
Izimvo zokugcina igaraji ze-DIY ziyindlela elungileyo yokubeka izinto ezindala okanye ezingasetyenziswanga kakuhle. Umzekelo, ipaneli yamaplanga ehlanguliweyo inokusetyenziswa njengebhodi yebhodi okanye inokusikwa ibe ngamaqhekeza aliqela ize iguqulwe ibe zishelufa. Iinkuni ezilahliweyo zingasetyenziselwa ukulungiselela izixhobo ezincinci kunye nezinto. Iingqayi ezindala kunye neebhotile zinokusebenza njengezikhonkwane zezikhonkwane kunye nezikrufu. Amathuba anokuphela xa kufikwa kugcino lwegaraji lwe-DIY okoko nje unobuchule kwaye uyila.
Ukulungiselela indawo yokugcina igaraji kuza ngokwamanqanaba amathathu ngokubanzi. Eyokuqala iyabhengeza, ilandelwe ngokwenza indawo enkulu kangangoko kwaye inyathelo lokugqibela kukukhetha isisombululo esifanelekileyo sokugcina. Nanga amanyathelo onokuwalandela njengoko uzibandakanya kwiprojekthi yakho yokugcina igaraji:
Lungiselela. Ngaphandle kokumisela injongo, isitayile, uyilo, uhlahlo-lwabiwo mali kunye nohlobo lweprojekthi, kuya kufuneka ulungiselele indawo. Ukulungiselela kubandakanya ukuchitha igaraji yakho. Unokwenza oku ngokuhlela izinto ofuna ukuzigcina, kufuneka uziphose okanye ufuna ukunikela. Khumbula, kufuneka ukhulule indawo kangangoko unako.
Hlela izinto kwizinto kwigaraji lakho. Iindidi eziqhelekileyo zibandakanya: izinto zokucoca, ukulungiswa kwendlu kunye nokulungiswa, izixhobo zephuli, izixhobo zemidlalo, izinto zokuzonwabisa, izixhobo zokulima, ukuhombisa iiholide, izixhobo zemoto kunye nezinto zokwenza izinto. Kananjalo xa uqhubeka nezinto zakho, kunqande ukugcina izinto eziyingozi kwaye ungami kakuhle xa uvezwa zizinto. Igaraji ihlala iveza ubumanzi, ukufuma kunye nobushushu obukhulu.
Hlela imixholo yegaraji kwiimfumba zezinto ezinxulumene noko. Nje ukuba uthathe isigqibo kudidi lwezinto eziya kugcinwa kwigaraji yakho lixesha lokuba uziqokelele ngokwamaqela. Dibanisa izinto ezifanayo kunye. Zibeke kwiibhokisi zekhadibhodi kuqala. Impazamo enye eqhelekileyo kukuthenga imigqomo yokugcina ngoko nangoko kwaye emva koko ufumanise ukuba unobungakanani obungalunganga okanye ayilingani kwigaraji yakho. Unokufuna ukugcina ibhokisi eyahlukileyo yezinto eziya kuphinda zisetyenziswe.
Thatha isigqibo ngoyilo lwakho. Chonga ubume obugqwesileyo begaraji yakho kwaye unike iindawo ezithile kuhlobo ngalunye lwezinto oza kuzigcina ngokuxhomekeke kubungakanani bokusetyenziswa kunye nobungakanani bazo. Gcina izinto ezisetyenziswa rhoqo kwindawo onokufikelela kuzo nakwimigca yokubona kwakho. Izixhobo kufuneka zigcinwe kufutshane nebhentshi. Izinto zamaxesha athile zingagcinwa kwimigqomo yeplastiki enokufakwa kwisitya kuba ayisayi kusetyenziswa rhoqo.
Yongeza indawo yokugcina. Ngoku ukuba sele unombono wokuba zingakanani izinto oza kuzigcina, ngoku unokumisela uhlobo kunye nenani lokugcina olifunayo. Faka ishelfu eludongeni, iikhabhathi okanye iinkqubo zokugcina ngaphezulu. Ukuba kufuneka, ungasebenzisa iinkqubo zemodyuli. Dibanisa ezi ntlobo ukuze ufumane isisombululo esigciniweyo sokugcina igaraji.
Nazi ezinye iingcebiso unokulandela njengoko uzibandakanya kwiprojekthi yakho yokugcina igaraji:
Sebenzisa indawo yesilingi . Sebenzisa isilingi yakho ngokwakha iloft njengoko ikhulula indawo kwaye ayikuthinteli ukuhamba kwezithuthi kwigaraji yakho. Ngokwenene ikunika imoto indawo yokupaka kuyo ngaphandle kokuxutywa kunye ne-clutter.
Sebenzisa umgangatho ukugcinwa kwesilingi. Yandisa indawo yakho ngokuhamba nkqo. Iinkqubo zokugcina udonga lweSlate, iibhodi zezikhonkwane kunye neegridi zocingo zonke ziinkqubo zodonga ezinokusetyenziselwa ukugcina nokubonisa izinto ezisetyenziswa rhoqo njengezixhobo, izixhobo zemidlalo okanye izinto zasegadini.
Sebenzisa kwakhona . Buyisela izinto ezinje ngemigqomo, imigqomo yenkunkuma okanye iibhotile kunye neejagi zokugcina izinto ezincinci kwigaraji yakho.
Olunye ukhetho lweeMbono zokuGcina iGaraji
Ezinye iindlela ezintsha zokuzama ukulungiselela ukugcinwa kwegaraji yakho:
Iipleyi kunye nokuphakamisa -Ezi zinto zisebenza kakuhle ukugcina izinto ezinkulu nezikhulu ngaphandle kokuthatha indawo exabisekileyo. Kukulungele ukuququzelela ii-kayaks, amaphenyane, ibarley yevili okanye iibhayisekile.
Iingwegwe -Ihokwe sisisombululo esinexabiso eliphantsi esifumaneka ngokulula naphi na. Kukulungele ukuxhoma kunye nokugcina iibhayisikile, iimpahla zangaphandle, izinto ezisingathiweyo ezinde ezinje ngezixhobo zasegadini, izixhobo zephuli kunye nezixhobo zemidlalo.
Imigqomo ezinzileyo -Imigqomo yokugcina ilukhuni, iyonga kwaye iyindlela yokusetyenziswa. Ingasetyenziselwa ukugcina izinto ezahlukeneyo zincinci ukuya kumanani amakhulu. Ithengiswa ngentsimbi okanye iifom zeplastiki kwaye inokufakwa ngokuthe nkqo okanye ngokuthe nkqo. Imigqomo yokugcina ivumela ukufikelela ngokulula kwezinto ezisetyenziswa rhoqo ngelixa ugcina uthuli lungekho. Khetha imigqomo enokubekwa ngokucacileyo necacileyo ukuze ufumane umbono wento engaphakathi kwaye uhlala unamathisela iilebhile ezinokufundeka ukuze kube lula ukufumana into oyifunayo.
Iileyili ezijingayo -Njengamakhonkco ezi zinto zilungele izixhobo zemidlalo, iibhayisikile okanye izixhobo zokulima.
iikhabhathi ezimhlophe ezi-rustic
Inkqubo yokuGcina iMfono -Ezi ziiyunithi zokugcina eziza kunye neefersers ezenza ukuba kube lula ukuhamba ngapha kwegaraji. Kukulungele ukugcina izixhobo ezincinci zemoto kunye nezixhobo zokugcina ikhaya.
Umthi kunye nezikhonkwane ezijingayo -Ezi zimvo zilula zokugcina igaraji ze-DIY sisisombululo esikhawulezileyo nesilula sokugcina njengoko zifuna kuphela isiqwenga somthi esineentloko zesikhonkwane ezibonakalayo zokuxhoma izinto. Kukulungele ukulungiselela izixhobo zegadi njengeeraki, iitawuli kunye nemihlakulo. Ukugqiba oku ngepeyinti entle ukuyenza ibe ntle.
Indawo yokubeka indawo - Esi sisombululo silula sokugcina sinokwakhiwa ngomthi okhutshiweyo kunye nezinto ezilahliweyo. Dibanisa iziqwenga zomthi kunye wenze ibhokisi yoxande emva koko uyihlule ube ngamacandelo avulekileyo. Iindawo zokubeka ezizodwa zilungele ukugcina izinto ezisingathiweyo ezide.
Izinto ezibuyisiweyo -Iibhotile esele zisetyenzisiwe, iingqayi okanye izikhongozeli zeplastiki zikulungele ukugcina izinto ezincinci ezinjengezikrufu, iinzipho okanye iibholiti. Iingqayi zeglasi zikunika umbono ocacileyo wento egcinwe ngaphakathi kuyo ukuze ukwazi ukubona ngokulula into oyifunayo. Icala lelo sisisombululo sendalo esingqongileyo kuba senza indlela yokuhamba ngebhayisikile.
Ukucwangcisa ukugcinwa kwakho, izinto ezincedisayo kunye noyilo ungasebenzisa enye yasimahla okanye ehlawulelweyo Isoftware yoyilo lwegaraji iinkqubo ezikolu luhlu.
IKeter yokuGcina iKhabhathi enamagumbi kunye neshelv… $ 166.00 umthengisi ogqibelele (6603) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Sterilite 19859806, 30 Quart / 28 Liter Ultra… $ 69.87 umthengisi ogqibelele (Ngo-1921) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Sterilite 16249006 Medium Ultra Basket,… $ 26.15 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-1435 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Abaququzeleli beNgxowa yokuGcina yeSogbus, eNkulu… $ 15.19 umthengisi ogqibelele (6407) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
kunye nesayizi yeedilesi zomtshakazi
iindawo zomtshato elunxwemeni
indlela yokwenza isaphetha esihle
ilokhwe ende ye-maxi yomtshato